အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ ထဘီတန်း အောက် ကို ဝင်ရင် ဘုန်းကံ နိမ့် တတ် ပါသလား? – GaMone Media
Homepage / Knowledge / အမျိုးသမီးတွေ ရဲ့ ထဘီတန်း အောက် ကို ဝင်ရင် ဘုန်းကံ နိမ့် တတ် ပါသလား?
ပိတ်စတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ပိတ်စ တစ်ခုဟာ သင့်ကိုဘယ်လို များဒုက္ခ ရောက်စေမလဲ။ ဘုန်းနိမ့်တယ် ဆိုတာက သင်ထင်သလိုမဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဘုန်းနိမ့်ပြီဟဲ့ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ဟာ negative feeling ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ စိတ် အလိုမကျဖြစ်စေတယ်။ စိတ်ကို နောက်ကျိ စေတယ် ၊ အဲဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကျဆင်းခြင်း ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းနိမ့်ခြင်းပါပဲ ”
အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး၊ လိုအပ်ခဲ့လို့ ဝင်ရပြီ ဆို လည်း ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ မယူဆပါဘူး ။ ရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ အစွမ်းအစဖြစ်တဲ့ သီလသမာဓိပညာဟာ ဒီထဘီတန်းကြောင့်တော့ ကျဆင်းစရာ မရှိပါဘူး
တပည့်တော် ကြားဖူးတာက မိန်းမဟာ ဘုန်းကံနိမ့်တဲ့အတွက် မိန်းမ အောက်ပိုင်း ဝတ် တဲ့ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ ကြားဘူးထားပါတယ်ဘုရား
ဒါဟာ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ခြင်းကြောင့် နိမ့်တာမဟုတ်ဘူး နိမ့်တယ်လို့ ထင်မိတဲ့ ဥပါဒါန် အကြောင်းကြောင့်ပဲ။ စိတ်မသက်မသာ ခံစားရတယ် မဟုတ်လား။ ဒါ သက်တောင့်သက်သာစိတ် ပျက်စီးသွားခြင်းပေါ့။ စိတ်သက်တောင့် သက်သာဖြစ်တာ မကောင်းဘူးလား
တပည့်တော် တစ်နေ့ကားစီးတော့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဘေးမှာ ထိုင်ဖြစ်တယ်၊ အဖွားအို တစ်ယောက် တက်လာတော့ ကျနော်ကနေရာ ပေးတယ် အဖွားအိုက ငြင်းတယ်၊ ဘုန်းကြီးဘေးမို့ မထိုင်ရဲဘူးတဲ့ ဘုရား ” ကားပေါ်မှာ သံဃာတော်ကို ဦးစားပေးတဲ့အယူအဆကို မှန်တယ်လို့ အရှင်ဘုရားမြင်မိလား
ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတစ်ပါးက မဟာဇနကဇာတ်ကို တကယ်ဖြစ်ခဲ့ မဖြစ်ခဲ့မတွေးဘူး ဆိုတော့ ဒီစကား တာဝန် မကြီးဘူးလားဘုရား
Previous post စမ်းချောင်း မြို့နယ်တွင် ပြည်သူ တွေ နဲ့ အတူ လူထုလှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင် အားဖြည့်လာတဲ့ ကျားပေါက်
Next post ယခု ဒေါ က် တာ ဆာဆာ ရဲ့ GENERATION Z ကို ပေး စာ